Ciise: Boqortooyada Ilaah, Kaniisadda Caalamka ee God Switzerland (WKG)
Waa maxay waxa ugu muhiimsan noloshaada? Ma Ciise baa? Ma halka ay higsanayso, halka ay higsanayso, isku xidhka, noloshaada? Ciise waa diiradda noloshayda. Isaga la'aantiis nolol la'aan ayaan ahay, la’aantiisna waxba kama shaqeynayo dariiqa saxda ah. Laakiin Ciise, farxad intee le'eg ayaan ku noolahay Boqortooyada Ilaah.
Ka dib caqiidadii in Ciise yahay Masiixa, Rasuulkii Ilaah, Masiixa, waxaan kuu cadeynayaa: «Waxaad la deganeysaa ciise ciise maxaa yeelay waa dhexdiina, anaga dhexdeena ah».
Farrisiintii waxay weyddiiyeen goortii boqortooyada Ilaah timaado. Wuxuu ku jawaabay: "Boqortooyada Ilaah uma imaanin qaab lagu aqoonsan karo calaamadaha dibedda mana aha suura gal in la yiraahdo: waa kan waa! Ama: Waa ay jirtaa! Maya, Boqortooyadii Ilaah ayaa dhexdaada ku jirta. Ama: "Bal eeg, Boqortooyada Ilaah waa idinku dhex jirtaa" (Luukos 17, 20-21 Tarjumaadda New Geneva).
Ciise si xoog ah ayuu u bilaabay inuu ku dhawaaqo boqortooyadii Ilaah isagoo leh awood, Farrisiintiina gacanta ayey ku jireen. Waxay ku eedeeyeen inuu caytamo xitaa haddii uu run sheego. Wuxuu ka marag furay injiilkiisa in waqtigu yimid oo boqortooyadii Ilaah ay timid (ka dib Mark 1,14-15). Oo waxaa timid naag reer Samaariya ah inay biyo u dhaansato ceelka Yacquub. Ciise wuxuu wadahadalkii kula bilaabay iyada: "I waraabi!" «Ciise wuxuu ugu jawaabay: Haddaad garan lahayd waxa hadiyadda Eebbe ka kooban tahay iyo cidda ay tahay kan kugu odhanaya: Ii dhiib wax aan cabbo, kolkaas adigu waad weyddiisan lahayd isaga oo isagana wuxuu ku siin lahaa biyaha guga, biyaha nool. Laakiin ku alla kii cabba biyahaan siin doonaa, weligiis ma harraadi doono weligiis. Biyo aan siin doono waxay noqon doonaan ilo biyo ah iyagoo qulqulaya weligood ilaa nolosha weligeed ah (Yooxanaa 4,9: 14 Tarjumaadda New Geneva).
Ciise wuxuu sidoo kale ku siinayaa jidkiisa nolosha si ay si joogto ah ugu socoto adiga iyo deriskaaga, hadda iyo nolosha weligeed ah ee sarakicidda. Laakiin waxaa la joogaa wakhtigii, haa, mar horeba waa halkaas oo ay dadku ku caabudi doonaan Ilaaha Aabbaha ah, iyo dadka ka buuxsamay Ruuxa oo runta aqoonsan. Ilaah waa ruuxa kuwa raba inay caabudaan isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta » (Yooxanaa 4,23: 26 Tarjumaadda New Geneva).
Sideed Ilaah ugu caabudaysaa ruuxa iyo runta? Ciise wuxuu yidhi: "Anigu waxaan ahay geedka canabka ah ee aad tihiin geedka canabka ah!" Haddii aad ku sii jirto geedka canabka Ciise, waxaad dhali doontaa miro, midho badan, haa miro badan. Waa inaad u isticmaashaa midhaha Ciise ku siiyay inaad deriskaaga u siiso. Jacayl, farxad, nabad, dulqaad, naxariis, roonaan, roonaan, is-hoosaysiin iyo is-xakameyn, jidka nolosha Ilaah, maahan midhaha Ruuxa, laakiin waa muujinta jacaylka aad u hayso deriskaaga. Isha jacaylka, Ciise, oo si joogto ah u qulqulaya, weligiis ma engegi doono, laakiin wuxuu ku qulqulayaa nolosha weligeed ah. Tani waxay khusaysaa maanta iyo mustaqbalkaba, halkaasoo boqortooyada Ilaah laga arki karo buuxinteeda.
Adiga, Ciise wuxuu isu muujiyey xaaskaaga, carruurtaada iyo waalidiintaada, asxaabtaada iyo ragga kale, si kastaba ha noqotee way ka duwan yihiin. Ciise wuxuu doonayaa jacaylkiisa jacayl ee kugu socda inuu kugu dhex maro kuwa kugu xiga. Waxaad jeclaan laheyd inaad la wadaagto jaceylkaa kuwa aad jeceshahay sababtoo ah waad ugu mahadcelineysaa sida naftaada.
Adiga iyo aniga waxaan leennahay rajo nool maxaa yeelay sarakiciddii Ciise ee kuwii dhintay waxay na siisay dhaxal aan kala go ’lahayn: nolosha weligeed ah ee boqortooyada Ilaah. Waxaan diiradda saarayaa taas: Ciise Masiix ee Boqortooyada Ilaah.
waxaa qoray Toni Püntener